Galmudug oo guulo ka sheegatay dagaallada ka socda Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo guulo ka sheegatay dagaallada ka socda Mudug
Maamulka Galmudug ayaa guulo ka sheegtay howlgal maalitii shanaad galay oo ka socda koofurta Gobolka Mudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - War ka soo baxay Wasaaradda Amniga Maamulka Galmudug, ayaa lagu sheegay in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Daraawiishta Galmudug oo is garabsanaya ay guulo ka gaareen dagaallo muddo tododaad ku dhow ka holcayay degaannada Koofure ee Gobolka Mudug.
“Aragagixisada ayaa jab iyo khasaaro xooggan la gaarsiiyey ayadoo ciidamada huwanta ahi ay la wareegeen goobo istaatiiji ah oo ay ka mid yihiin Qodqod iyo Qaycad, loona ruqaansaday dhanka Camaara”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye, (Qoorqoor), ayaa muddo ku sugan magaalada Gaalkacyo, waxaana degaannada dagaalku ka socdo lagu arkay Wasiirka Amniga Axmed Macalin Fiqi, iyo Madaxweyihii hore Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid.
Howlgalkaan, oo la sheegay in uu billow u yahay dadaallo Galmudug looga xoreynayo Al-Shabaab, ayaa la soo warinayaa in laga gaaray guulu degdeg ah, waxaana ciidamadu ku sii dhowyaan degaannada Caad iyo Camaara.